Filohan'ny filankevi-pitantanana Afrikana any Sénégal amin'ny iraka manan-danja
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Filohan'ny filankevi-pitantanana Afrikana any Sénégal amin'ny iraka manan-danja
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • People • Vaovao farany momba an'i Senegal • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Filohan'ny ATB any Sénégal
Cuthbert Ncube, Filohan’ny Birao afrikanina momba ny fizahantany (ATB), dia manohy ny iraka mitety faritra rehetra amin’ny fizahantany eto Afrika mba hampivondronana ny kaontinanta.
Nisy ny fihaonan’ny roa tonta niaraka tamin’ny ekipan’ny filankevi-pitantanan’i Afrika momba ny fizahantany momba ny fanavaozana an’i Sénégal ao anatin’ny dian-tongotra kaontinanta.
Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana ny fiaraha-miasa sy ny faniriana hanamafy ny fifandraisana eo amin’ireo fikambanana roa ireo mba hampiroboroboana ny fizahantany.
Nitarika ny fivoriana ny Masoivoho hajaina Andriamatoa Deme sy ny filoha mpanatanteraka, Cuthbert Ncube.
Omaly ny Birao fizahantany afrikanina Nihaona tamin'ny Filohan'ny Compact Yaatal, fikambanana iray misolo tena ny mpandray anjara amin'ny fizahan-tany any Sénégal ny filoha ary misy mpikambana 934 rojo sanda ao amin'ny foibeny ao an-tanànan'i Soly izay ivon-toerana fizahan-tany lehibe ao amin'ny firenena.
Ny Filohan’ny Fikambanana, Atoa Boly Geuye, dia nanao fivoriana roa tonta niaraka tamin’ny ekipan’ny ATB izay notarihin’ny Masoivoho hajaina Atoa Deme sy ny filoha mpanatanteraka, Cuthbert Ncube, mikasika ny fiaraha-miasa sy ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin’ny roa tonta amin’ny fampiroboroboana ny fizahantany sy ny fizahantany. fanavaozana ny Sénégal ao anatin'ny dian-tongotra kaontinanta.
Nanao zavatra betsaka i Sénégal tamin'ny fanakanana ny fihanaky ny valan'aretina niaraka tamin'ny firenena nahatratra saika 0% ny tahan'ny otrikaretina izay nahasarika fitohanan'ny fizahan-tany marobe ny ankamaroany avy any Paris, Espaina, Alemana, UK, ary ny faritra sasany any Azia. Nohamafisin’Atoa Boly fa ilaina ny fiaraha-miasa akaiky kokoa amin’ny ATB mba hisian’ny fanamboarana kontinanta mirindra tsara, satria Lany stratejika i Sénégal mba hilalao horonan-tsary eo amin'ny sehatry ny zavakanto, kolontsaina ary fizahan-tany ara-panatanjahan-tena eo ambonin'ireo seho eny amoron-tsiraka izay mahatonga ny mpandeha ho tia an'ity fialofana tsara tarehy ity izay toerana tadiavin'ny mpandeha iraisam-pirenena.
Hisy alina lehibe ho an’ny fizahantany hatao amin’ny endrika kaonferansa ny 10 desambra 2021, izay hitondrana ireo minisitry ny fizahantany sy ireo mpiara-miombon’antoka manerana ny faritra Andrefana, izay hotoloran’ny minisitry ny fizahantany ary tohanan’ny ATB. Ny fiaraha-mientana lehibe sy midadasika kokoa manerana ireo mpandray anjara amin'ny fizahantany dia hametraka an'i Afrika ho hajaina tsara eo amin'ny fiaraha-monina maneran-tany, ary ny fizahan-tany dia hitondra ny zava-bita ho amin'izany tanjona izany.